heino gwara rako rakazara kune yakanakisa hp nhema yechishanu madhiri
Kuru Nhau & Ongororo Hechino chako chinongedzo chakazara kune akanakisa HP Nhema Chishanu madhiri
Hechino chako chinongedzo chakazara kune akanakisa HP Nhema Chishanu madhiri
Hwema hunotapira hwemanhanga, sinamoni, nutmeg ... uye maekisesaizi emuchadenga ari mumhepo, nemapepa eChishanu eChishanu achidonhedza kuruboshwe, kurudyi, nepakati kubva kuvashambadzi vakuru veUS, pamwe nevamwe vepasirose vagadziri vemagetsi emagetsi, zuva guru zvarinoswedera pedyo.
Ehe, isu tinogonawo kushevedza uyu Mbudzi 'Mwedzi Mutsvuku' zvakapihwa kuti hombe nhamba yekumanikidza Walmart Nhema Chishanu kutengesa semuenzaniso, vatove vapenyu, nechikwata chechipiri chiri kusvika mumazuva mashoma uye kupera kwemwaka wekutenga wezororo wakatarwa kutanga kwekutanga gare gare mwedzi uno.
Izvo zvinoenda kune avo mhondi Yakanakisa Tenga Nhema Chishanu madhiri , iyo yakatanga kwenguva refu pamberi paNovember 27, nepo vashoma Lenovo Nhema Chishanu 2020 vanovhara masuo vaiwanika muhuwandu hushoma kwenguva yakati rebei kutanga kwesvondo rino. Zviripachena, iyo & apos; s Lenovo pane Walmart kana Best Buy iyo HP ichaedza kukwikwidzana neayo mahombe mahwendefa e Kukwira kweChishanu kweChishanu kwakaziviswa zvizere kare nhasi . Neimwe nzira, zvakafanana zvinogona kuitika panguva yezviitiko zvikuru zvekutenga senge Walmart Prime Day kutengesa .
Isu kuFoniArena tiri kuchengeta zvakanyatso tarisa kune ese Prime Day Kutengesa , zvese kuAmazon nekumwewo. Iwe chete unofanirwa kutarisa yedu dhiri hub kune akanakisa madhiri kuti uwane izvo zvaunoda!
HP Black Chishanu yekutengesa inotanga riini?
Kusiyana nemukwikwidzi wayo, HP inoronga kumirira kwenguva yakati rebei isati yaisa chero chinhu kupihwa kweChishanu Chishanu. Izvo zviri kutaurwa, kambani haizochengetedze vateveri vayo vakaoma vakamirira kwese kusvika musi wa27, vachirova zvinhu musi waNovember 26 uye pasina mubvunzo vachida kuchengetedza mutambo wechibvumirano unoenda munaNovember 30 pazvishoma.
Zvakare zvakasiyana neLenovo, HP yakanangana nekutengesa zvinhu zvayo, saka kana iwe & apos uchifarira zvinhu zvakaita semidziyo yekumba zvigadzirwa, zvishandiso zvinopfeka, mapiritsi, kana nharembozha (tisingatauri mafoni), iwe & apos; munofanira kutarisa kumwe kunhu. Asi kana iwe uchida kuwana yakanaka nyowani laptop, desktop, tarisisa, kana zvimwe zvemakomputa zvinowoneka pamutengo mukuru munguva yeKisimusi, unofanirwa kunyatso ramba uchiverenga.
Yakanakisa HP Nhema Chishanu inobata paWindows malaptop
Uku kutengeswa kune mabhonker, zvese zvakaenzana uye zvine hunyanzvi, sezvo HP yakanyanya kuita kunge ine chidimbu chega chega, niche, uye tarisiro yevateereri yakafukidzwa, tisingatauri zvese zvemitengo yemitengo kubva padiki kusvika mazana matatu emadhora kusvika kumadhora chiuru nemazana matanhatu. Zvese zvinotevera kutangisa mitengo, mufunge, saka chenjera kumwe kukwidziridzwa kana shanduko dzekumisikidza kana iwe usingade kubhadhara ruoko negumbo.
Iwe unogona zvakare kuda kuramba uchitarisa paHP & apos; s yepamutemo webhusaiti yeUS zvakanyanyisa nguva zhinji pakati paNovember 26 na30, sezvo akawanda maWindows malaptop akanyorwa pazasi achange achirovera mamwe madhora mu 'mashoma huwandu' panguva dzakasiyana panguva yekambani & apos; yakawedzera nguva yeChishanu yeChishanu, uye chimwe chinhu chinotitaurira vamwe vevakomana vakaipa vakanyanya kutengeswa vanozotengesa kunge hotcakes:
Specter x360 13t kubata - $ 780 ($ 270 yabviswa)
Pavilion 15z-eh000 - $ 469.99 ($ ​​180 yabviswa)
Shanje 17t-cg100 - $ 649.99 ($ ​​300 yabviswa)
Omen 15t dh100 - $ 849.99 ($ ​​250 yabviswa)
17z-ca200 - $ 349.99 ($ ​​210 yabviswa)
Shanje x360 15z-ds100 - $ 599.99 ($ ​​200 yabviswa)
HP 15t-dw300 inobata sarudzo - $ 419.99 ($ ​​250 yabviswa)
Specter x360 15t-eb100 kubata - $ 1,279.99 ($ ​​450 yabviswa)
Shanje x360 15t-ed100 kubata - $ 569.99 ($ ​​300 yabviswa)
HP 15z-ef100 - $ 299.99 ($ ​​70 yabviswa)
Shanje 13t-ba100 - $ 619.99 ($ ​​250 yabviswa)
Pavilion x360 14t-dh200 kubata - $ 499.99 ($ ​​270 yabviswa)
HP 15t-dw200 - $ 449.99 ($ ​​210 yabviswa)
Specter x360 14t kubata - $ 1,099.99 ($ ​​300 yabviswa)
Pavilion 15t-cs300 - $ 599.99 ($ ​​320 yabviswa)
Specter x360 13t aw200 kubata - $ 779.99 ($ ​​270 yabviswa)
Specter 15t-eb100 kubata - $ 1,199.99 ($ ​​400 yabviswa)
Shanje x360 15t-ed000 kubata - $ 789.99 ($ ​​350 yabviswa)
Pavilion x360 14t-dw000 kubata - $ 419.99 ($ ​​160 yabviswa)
HP 17z-ca300 kubata - $ 399.99 ($ ​​300 yabviswa)
Shanje x360 15z-ee000 kubata - $ 599.99 ($ ​​270 yabviswa)
HP 14z-dk100 - $ 279.99 ($ ​​120 yabviswa)
Omen 15-en0029nr - $ 1,199.99 ($ ​​100 yabviswa)
Omen 15t-ek000 - $ 679.99 ($ ​​350 yabviswa)
Omen 17t-cb100 - $ 849.99 ($ ​​230 yabviswa)
Pavilion Gaming Laptop 15t-dk100 - $ 599.99 ($ ​​100 yabviswa)
EliteBook 840 G7 - $ 660.40 (60 muzana yabviswa)
EliteBook 850 G7 - $ 748.40 (60 muzana yabviswa)
EliteBook x360 1030 G7 - $ 1,380 ($ 1,130 yabviswa)
Elite Dragonfly - inosvika kumadhora mazana manomwe kubva
EliteBook x360 1040 G7 - $ 1,405 ($ 1,105 yabviswa)
EliteBook 840 G6 - $ 660 ($ 990 yabviswa)
EliteBook x360 830 G7 - $ 1,145 ($ 940 yabviswa)
ZBook Fury 17 G7 - $ 1,370 ($ 915 yabviswa)
ZBook Firefly 14 G7 - $ 1,074.16 ($ 777 yabviswa)
ZBook Gadzira G7 - $ 1,602 ($ 2,403 yabviswa)
ZBook Power G7 - $ 460 ($ 685 yabviswa)
Yepamusoro HP Nhema Chishanu kuchengetedza paChannelbook
Zviripachena, kune mashoma mashoma Chrome OS-akavakirwa malaptop akagadzirirwa kugamuchira akakosha mitengo kudonhedza padhuze nekupera kwemwedzi kuHP nekuti, zvakanaka, kambani inogadzira uye inotengesa mashoma mashoma akadaro mamodheru. Zvimwe zvekudzikisira zvinogona kunge zvisingaite kunge zvinonakidza pakutanga pekutarisa futi, asi izvi zvatova nemutengo wakaringana, saka pakanga pasina & apos; t chaiyo nzvimbo yakawanda yeEliteBook kana ZBook-inokwikwidza kudzikiswa.
Chromebook x360 14c-ca0000 - $ 429.99 ($ ​​200 yabviswa)
Chromebook 11a nb0047nr - $ 179.99 ($ ​​40 yabviswa)
Chromebook 14 db0020nr - $ 199.99 ($ ​​50 yabviswa)
Chromebook x360 14c ca0065nr - $ 379.99 ($ ​​170 yabviswa)
Chromebook x360 14b ca0010nr - $ 299.99 ($ ​​80 yabviswa)
Chromebook x360 12 ca0010nr - $ 279.99 ($ ​​80 yabviswa)
Chromebook 14-db0030nr - $ 199.99 ($ ​​50 yabviswa)
HP Nhema Chishanu kutengesa pamakomputa edesktop
Kunyangwe iwe uine isingasviki madhora mazana mana ekushandisa kana anodarika madhora chiuru, uye zvisinei kana uchisarudza echinyakare desktops, ese-mu-one maPC, kana mini mini makomputa, HP ine musana wako nezvikwereti zvichibva pamadhora zana kusvika kumadhora 1,400 (!!! ) pane yakasarudzika uye yakasarudzika sarudzo yezvigadzirwa zvinodyisa kune wese munhu kubva kune vanonyanya kudzvanya vashandisi vebhizinesi kune vakaomarara vatambi uye vashandisi vasina kujairika pamabhajeti akaomarara:
Pavilion 27-d0255xt Zvese-mu-Mumwe - $ 849.99 ($ ​​100 yabviswa)
Shanje Desktop TE01-1150xt - $ 399.99 ($ ​​200 yabviswa)
Slim Desktop S01-pF1025e - $ 399.99 ($ ​​100 yabviswa)
Shanje Desktop TE01-0165t - $ 649.99 ($ ​​200 yabviswa)
Omen 30L Desktop GT130-0280z - $ 999.99 ($ ​​200 yabviswa)
Zvese-mu-Mumwe 22 df0120m - $ 449.99 ($ ​​100 yabviswa)
Omen 25L Desktop GT12-0225qd - $ 749.99 ($ ​​150 yabviswa)
Omen 30L Desktop GT13-0280z - $ 999.99 ($ ​​200 yabviswa)
Pavilion Gaming Desktop TG01-1160xt - $ 599.99 ($ ​​200 yabviswa)
Z2 G4 Shongwe inosvika pamadhora 1,300 kubva
Z4 G4 Workstation - $ 1,161.90 (55 muzana yabviswa)
Z1 G5 Workstation - inosvika kumadhora chiuru nemazana matanhatu
Z2 Diki Fomu Chinhu G4 Kunoshanda - $ 627.75 (55 muzana yabviswa)
ProDesk 400 G5 Mini - $ 339.20 (60 muzana yabviswa)
EliteDesk 800 G5 Mini - $ 570 ($ 870 yabviswa)
ProDesk 600 G5 SFF - $ 640 ($ 525 yabviswa)
ProDesk 400 G6 SFF - $ 425 ($ 695 yabviswa)
maitiro ekuchinja misoro yekutaura
iphone 7 jet nhema Wallpaper
Motorola DROID Turbo 2 uye DROID Maxx 2 saizi kuenzanisa vs vanokwikwidza: yakakura sei yakakura zvakakwana?
Galaxy S7 kumucheto kwescreen kutsiva ndeye $ 270, urikubhadhara parizvino inishuwarenzi?
Activision kuvhura nyowani Call of Duty nhare mbozha yakagadzirwa mumba
Mira kushandisa maapplication kuyera BP yako
Kutanga mangwana, kugadzirisa skrini yakatsemuka inongova $ 29 chete kuburikidza neVerizon & apos; s Yese Yekuchengetedza Mobile chirongwa
Maitiro ekuwana macandi neiyo nyowani Pokemon Go Buddy system (kureba runyorwa rweimwe Pokemon)